Waxbarasho xirfadeedka suuqa shaqada - InfoFinland
Nolosha Finland > Waxbarashada > Waxbarasho xirfadeedka suuqa shaqada
Waxbrasho xirfadeedka suuqa shaqadu wuxuu adiga kaa caawinayaa helitaanka shaqada. Waxaad baran kartaa xirfado cusub amaba xittaa mihnad cusub. Tababarku wuu ku hagi karaa marka aad ku jirto shaqo raadinta. Waxbarasho xirfadeedka suuqa shaqadu waa lacag la’aan.
Xafiiska shaqada (TE-toimisto) ayaa qabanqaabiya waxbarasho xirfadeedka suuqa shaqada. Waqtiga aad waxbarashada ku jirto waxaad heleysaa manfaca shaqo la’aanta.
Waxbarasho-xirfadeedka xoogga shaqada Finnish | Iswidish | Ingiriis
Warbixinta waxbarashada xafiiska shaqadu bixiyaanFinnish | Iswidish
Yaa loogu talagalay waxbarasho xirfadeedka suuqa shaqada?
Waad ka qeybgeli kartaa waxbarasho xirfadeedka suuqa shaqada, haddii
aad ka weyn tahay 20 sano o
aad shaqo la’aan tahay ama ay shaqo la’aan kugu dhici rabto
aad xaq u leedahay isticmaalka adeegyada Xafiiska shaqada
Xaq ayaad u leedahay isticmaalka adeegyada Xafiiska shaqada haddii lagu siiyay ogolaanshaha joogitaanka sii socda (A) ama ogolaanshaha joogitaanka joogtada ah (P).
Raadi waxbarashada xoogga shaqadaFinnish | Iswidish
Sidee u codsanayaa waxbarasho xirfadeedka suuqa shaqada?
Waxaad codsi waxbarasho xirfadeedka suuqa shaqada ka samayn kartaa Xafiiska shaqada ama foomka elekterikaalka ah ee internetka ku jira.
Codsiga waa in aad ku sheegtaa sababta ay tahay in adiga laguu xusho waxbarashada. Si fiican uga fikir sababaha. Sababuhu waxey saameyn ku yeeshaan xulashada ardayga. Xafiiska shaqada ayaa ardayda u xulanaya waxbarasho xirfadeedka suuqa shaqada.
Maxaan ku baran karaa waxbarasho xirfadeedka suuqa shaqada?
Waxyaabaha ku jira waxbarasho xirfadeedka suuqa shaqadu aad ayeey isu beddelaaan. Waa kuwan tusaalooyinka qaar ka mid ah waxbarasho xirfadeedka suuqa shaqada:
Waxaad ku baran kartaa xirfad xusub ama qeyb ka mid ah.
Waxaad ku baran kartaa Finnish ama Iswidhis.
Waxaad carbin u heli kartaa shaqo raadinta.
Aqoon kororsi ayaad aqoontaada u heli kartaa ama waxbarasho dhameystir ah.
Waxaad carbin u heli kartaa shirkadnimada ama tababar ganacsi.
Waxbarasho xirfadeedka suuqa shaqadu waa noocee?
Xafiiska shaqadu wuxuu machadyo iyo shirkado kala duwan ka iibsadaa waxbarasho xirfadeedka suuqa shaqada. Waxey ka dhigan tahay in aadan wax ku baraneyn gudaha Xafiiska shaqada ee waxaad wax ku baraneysaa machad, kaas oo qabanqaabinaya kooraska. Xafiiska shaqadu wuxuu sidoo kale shaqo bixiyayaasha la hirgeliyaa waxbarashooyinka.
Machadyada qaarkood waxey qabanqaabiyaan waxbarasho xirfadeedka suuqa shaqada oo si gaar ah loogu talagalay dadka muhaajiriinta ah. Waxbarashadaan waxuu noqon karaa barashada afka Finnishka ama waxbarasho xirfadeed.
Koorasyada qaarkood waxaad ku qaadan kartaa aqoon aad Finland xirafaddaada kugula shaqeysato. Tusaale ahaan kalkaaliyayaasha caafimaadku waa in ay qaataan waxbarasho dheeraad ah si ay shaqada Finland uga qabtaan shaqada kalkaaliyanimada caafimaadka. Faahfaahin dheeraad ka sii aqri bogga InfoFinlandi Shahaadooyinka dibadda ee Finland.
Kaalmada dhaqaale ee xilliga waxbarasho xirfadeedka suuqa shaqada
Inta lagu jiro xilliga waxbarasho xirfadeedka suuqa shaqada waxaa lagu siinayaa manfac la mid ah kan marka aad tahay shaqo la’aan. Haddii aad qorshaha shaqaaloobista ku gashay heshiis ku saabsan waxbarasho xirfadeedka suuqa shaqada, waxaad heli kartaa macfaca shaqo la’aanta oo la kordhiyay. Waxaa adiga lagu siinayaa manfac shaqo la’aaneed yara badan. Bixinta qeybta kordhinta waxaa go’aan ka gaaraya bixiyaha manfaca shaqo la’aanta, yacni kaasada shaqo la’aanta ama Kela.
Waxaad sidoo kale maalmaha ka qeybgalka waxbarashada heli kartaa magdhow qarash, oo lagu magdhabo qarashka safarka. Haddii aadan ka helin lacagtaas bixiyaha manfaca shaqo la’aanta, xaaladaha qaarkood marka lagu jiro Xafiiska shaqada ayaa ku siin kara.
Magdhowga kharashka ee KeladaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Waxbarashada iskaa ah oo lagu kaalmeynayo manfaca shaqo la’aanta
Waxaad heli kartaa kaalmada shaqo la’aanta xittaa mudada waxbarashooyinka kale, haddii uu Xafiiska shaqadu u arko in aad u waxbarasho u baahan tahay. Xafiiska shaqadu ma keeno waxbarasho u mana xusho ardayda waxbarashada sida waxbarashada suuqa shaqada. Adiga ayaa toos uga codsanaya machadka booska waxbarashada.
Waa in aad waxabarashada kala heshiisaa Xafiiska shaqada ka hor int aadan billaabin waxbarashada.
Waad heli kartaa manfaca shaqo la’aanta mudada aad wax baraneyso haddii
aad isaga diiwaangelisay Xafiiska shaqada shaqo raadiye, shaqo raadintaaduna ay shaqeyneyso.
aad jirto ugu yaraan 25 sano.
uu Xafiiska shaqadu u arko in waxbarasho ay hagaajineyso aqoontaada xirfadeed ama ay kaa caawineyso helitaanka shaqo.
aad Xafiiska shaqada ugala heshiisay waxbarashada qorshaha shaqaaloobista.
Waxbarashooyinkee ayaa lagu heli karaa manfaca shaqo la’aanta?
Manfaca shaqo la’aanta waxaa lagu kaalmeeyaa waxbarashada rasmiga ah oo kaliya. Waxbarashooyinkan soo socda ayaa ah kuwa rasmiga ah:
waxbarashooyinka tacliinta sare;
waxbarashooyinka dugsiga sare; ama
waxbarashooyinka baaxaddoodu ay u dhiganto waxbarashada rasmiga ah, tusaale ahaa 5 dhibco waxbarasho bishii ama 25 saacadood oo waxbarasho ah todobaadki.
Waxbarashooyinku waa in lagu gaaraa
shahaadada xirfadeedka aasaasiga ah, shahaado xirfadeed ama shahaado xirfadeed takhasus ah
shahaada jaamacdeedka ama tacliinta sare ee koowaad ama labaad
qeybo ka mid ah shahaadooyinka kor lagu xusay.
Waxbarashooyinku waxaa laga yaabaa iney noqdaan waxbarasho dheeraad ah, waxbarasho dhameystir ah ama wax ka barashada jaamacadda ama dugsi-xirfadeedka sare.
Waxbarasho iskaa aad u keensatay oo lagu kaalmeeynayo manfaca shaqo la'aantaFinnish | Iswidish | Ingiriis